ဖူးနုသစ်: ငွေရေးကြေးရေး အတွေးစများ
စင်ကာပူက အော့ချက်လမ်းမပေါ် လမ်းလျှောက်ြဖစ်ရင် ကိုယ့်ဘာသာကိုယ် အားမလို အားမရ ခံစားရတတ် ပါတယ်။ မျက်စိရှေ့မှာ ဒေါ်လာတစ်သန်းကျော်တန်တဲ့ လမ်ဘော်ဂျီနီ (Lamborghini) ပြိုင်ကားတွေ နောက်ပြီးတော့ ဖယ်ရာရီတွေ ပေါ်ရှေးတွေ မီနီကူးပါးတွေ ဟိုဟိုဒီဒီ သွားနေတာ မြင်တိုင်း ငါသူတို့လောက် ဘာလို့ ပိုက်ဆံမရှိရတာလဲ ဆိုတဲ့ အတွေးမျိုး ဝင်မိပါတယ်။ Louis Vuitton ဆိုင်ရှေ့ အိုမီဂါနာရီ ရောင်းတဲ့ ဆိုင်ရှေ့ ဖြတ်လျှောက် မိပြန်ရင်လည်း လူတွေ ဘာလို့ ပိုက်ဆံတွေ ဒီလောက် ပေါနေကြသလဲ ဆိုတာမျိုး တွေးမိ ပြန်ပါတယ်။ ဒါတွေက ဂုဏ်တွေ ပကာသနတွေ အဆောင်အယောင်တွေပါလို့ မြင်ချင်ရင်လည်း မြင်လို့ရပါတယ်။ ဒါပေမယ့်လည်း ပိုက်ဆံပေါတာက ပိုက်ဆံမရှိတာထက် စာရင်ကောင်းတယ် ဆိုတာကိုတော့ ဘယ်သူမှ ငြင်းလို့ မရပါဘူး။
ကျွန်တော်တို့က ဆိုရှယ်လစ်ခေတ်ကို အဖျားခတ်မီလိုက်တော့ ပိုက်ဆံရှိတာကိုရော ပိုက်ဆံရှာတာကိုပါ တခါတလေ သိသိသာသာ တခါတလေတော့ မသိမသာ အဆိုးမြင် နေတတ် ကြပါတယ်။ ဒါ့အပြင် မြန်မာ စာရေးဆရာများကလည်း ဝတ္တုတွေထဲမှာ ပိုက်ဆံမရှိတာ မွဲတာကို ဂုဏ်တစ်ခုလို လုပ်ပြီး ရေးနေကြတော့ ကျွန်တော်တို့ သူတို့စာတွေ ဖတ်ပြီး မှိုင်းမိနေကြသလား မပြောတတ် ပါဘူး။ သမ္မာအာဇီဝ အလုပ်နဲ့ ကောင်းရောင်းကောင်းဝယ် လုပ်စားပြီး ပိုက်ဆံရှာတာ ရှက်စရာမကောင်းတဲ့ အပြင် လုပ်သင့်လုပ်ထိုက်တဲ့ အလုပ် ဆိုတာတော့ သေချာပါတယ်။
ပိုက်ဆံမရှာချင်တဲ့ သူတစ်ချို့ကတော့ သေရင် ကိုယ့်နောက်မပါဘူး ပြောပြီး ကိုယ့်ဘာသာကိုယ် ဖြေတွေး နေတတ်ပါတယ်။ သေချာတာကတော့ လူတိုင်း မနက်ဖြန် သေမှာ မဟုတ်ပါဘူး။ ထမင်းကြမ်း ယပ်ခတ်စားပြီး အေးအေးလူလူ နေရရင် ပြီးတာပဲ လို့ ပြောတဲ့သူလည်း ရှိပါတယ်။ လူတိုင်းတော့ အေးအေးဆေးဆေး နေချင်တဲ့သူ ချည်းပါပဲ။ ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်း အခန်းထဲမှာ ဝတ္ထုစာအုပ် တစ်အုပ်နဲ့ အေးအေးဆေးဆေး နှပ်နေရတာ၊ ကွန်ပြူတာရှေ့ထိုင်ပြီး ဂိမ်းကစားနေရတာ၊ ဘလော့ခ်လည်လိုက် ဘလော့ခ်ရေးလိုက် လုပ်နေရတာ သဘောကျပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ပြန်စဥ်းစားကြည့်တော့ ကျွန်တော့် အတွက်တော့ အေးအေးလူလူ နားနားနေနေ နေဖို့ဆိုတဲ့ အခြေအနေမျိုး မရောက်သေးဘူးလို့ တွေးမိပါတယ်။
ကျွန်တော်တို့ ပရိုဂရမ်မာ စကားနဲ့ ပြောရရင်တော့ နေသာတဲ့ အခြေအနေ ရှိသလို မိုးရွာတဲ့ အခြေအနေ ရှိပါတယ်။ ဘဝဆိုတာ ဘယ်တော့မှ တသမတ်တည်း သွားမနေပါဘူး။ အလှည့်အပြောင်းဆိုတာက တကွေ့မဟုတ် တကွေ့ကြုံရတတ်တာပါပဲ။ ကိုယ့်ဘာသာကိုယ် ဖူလုံနေတာကတော့ ဟုတ်ပါတယ်။ တကယ်လို့ ကိုယ့်မိသားစုထဲက တစ်ယောက်ယောက် ငွေကုန်ကြေးကျ များမယ့် ရောဂါတစ်ခုနဲ့ နာမကျန်း ဖြစ်ရင် ဘယ်လိုလုပ်မလဲ ဆိုတာမျိုးက ကြိုပြီး စဥ်းစားထားဖို့ လိုအပ်ပါလိမ့်မယ်။ ထမင်းကြမ်း ယပ်ခတ်စားတဲ့ အခြေအနေနဲ့တော့ အဲဒီလိုမျိုး ကြုံရရင် ဘာမှ တတ်နိုင်မှာ မဟုတ်ပါဘူး။ ကိုယ်ချစ်တဲ့ ခင်တဲ့သူတစ်ယောက် နာမကျန်း ဖြစ်နေတဲ့အချိန် ပိုက်ဆံမရှိလို့ ဘာမှ လုပ်မပေးနိုင်ဘူး ဆိုတာမျိုးက အတော်ကို ရင်နာစရာ ကောင်းပါတယ်။ ဒါမျိုးက သူများတွေ ကံဆိုးလို့ ဖြစ်တာ ငါ့အတွက်တော့ မဖြစ်နိုင်ပါဘူး ဆိုရင်တော့ ကိုယ့်ဘာသာကိုယ် ကိုယ်လွတ်ရုန်းချင်တဲ့ စိတ်နဲ့ တွေးတာပဲ ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။
ဒါဆိုရင် ချမ်းသာအောင် ဘယ်လိုလုပ်မလဲ ဆိုတာက နောက်ထပ် မေးရမယ့် မေးခွန်း တစ်ခုပါ။ သူများတွေ ကော်ဖီ လက်ဖက်ရည် သောက်တဲ့အချိန်တောင် ဘာမှ မသောက်ဘဲ ပိုက်ဆံစုတဲ့သူမျိုး ကြုံဖူးပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ပိုက်ဆံကို အဲဒီလိုစုလို့လဲ ချမ်းသာလာမှာ မဟုတ်ပါဘူး။ သေသေချာချာ စဥ်းစားကြည့်ပါ။ ကျွန်တော်တို့ တစ်လကို ဒေါ်လာတစ်ထောင် အသားတင် စုနိုင်ရင်တောင်မှ ၁၀နှစ်ကို ဒေါ်လာတစ်သိန်းကျော်ပဲ စုနိုင်ပါလိမ့်မယ်။ ငွေကြေးဖောင်းပွမှုက ဘဏ်ကပေးတဲ့ အတိုးနှုန်းထက် များတာကြောင့် အဲဒီအချိန်ကိုယ့်လက်ထဲမှာ ရှိတဲ့ ဒေါ်လာတစ်သိန်းရဲ့ တန်ဖိုးဟာ အခုအချိန် ဒေါ်လာတစ်သိန်းရဲ့ တန်ဖိုးထက် အများကြီး နည်းနေပါလိမ့်မယ်။
တစ်ချို့ က ပိုက်ဆံများများရဖို့ ပညာများများ တတ်ဖို့လိုတယ်လို့ တွေးကြပါတယ်။ ပညာတတ်တိုင်းလည်း ပိုက်ဆံ မချမ်းသာပါဘူး။ အထူးသဖြင့် လက်မှတ်တစ်ခုရှိရုံနဲ့ ဘဝလုံခြုံမှု ရှိတယ်လို့ တွေးရင် မှားပါလိမ့်မယ်။ စတန်းဖို့ဒ်က ဒေါက်တာဘွဲ့ရလာတဲ့သူ စင်ကာပူမှာ တက်ကစီ မောင်းနေတာ ရှိပါတယ်။ ကျွန်တော် အရင်လုပ်ခဲ့တဲ့ ကုမ္ပဏီမှာ နိုင်ငံတကာ အသိအမှတ်ပြုတဲ့ ဒီဂရီတစ်ခုနဲ့ မာစတာ နှစ်ခုအပြင် အိုင်တီလောကမှာ နာမည်ကြီးတဲ့ လက်မှတ်တွေ အတော်များများ ရှိတဲ့ မန်နေဂျာတစ်ယောက် အလုပ်ပြုတ်သွားပြီးတဲ့နောက်မှာ တစ်နှစ်ကျော် အခုထက်ထိ အလုပ်ပြန်ရှာမရတာ ကြုံဖူးပါတယ်။ ကျွန်တော့် ဘလော့ခ် လာဖတ်နေကြ သူငယ်ချင်း တစ်ယောက်ရဲ့ ကုမ္ပဏီမှာ ဒေါ်လာ ၁၅၀၀ မပြည့်တဲ့ လခနဲ့ အလုပ်လုပ်နေတဲ့ NTU က ဒီဂရီရပြီးသား အင်ဂျင်နီယာ တစ်ယောက် ရှိပါတယ်။ ပညာဆိုတာ တတ်ထားရင်တော့ မမှားပါဘူး။ ဒါပေမယ့်လည်း ပညာတစ်ခုတည်းကလည်း ဘဝအာမခံချက် မပေးနိုင်ဘူး ဆိုတာကတော့ သေချာပါတယ်။
သေချာပေါက် ပြောလို့ရတာကတော့ ပိုက်ဆံများများရဖို့ ပိုက်ဆံများများ ရှာရပါမယ်။ ပိုက်ဆံများများ ရှာနိုင်ဖို့ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု လုပ်ဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။ ကိုယ်ပိုင်လုပ်ငန်းနဲ့ ဖြစ်ြဖစ် ကိုယ်ပိုင်လုပ်ငန်းမဟုတ်တဲ့ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု မျိုးနဲ့ဖြစ်ြဖစ် ကိုယ့်မှာရှိတဲ့ ပိုက်ဆံကို တိုးပွားအောင် လုပ်ဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။ ဘယ်လိုပဲဖြစ်ြဖစ် ရင်းနှီးမြှပ်နှံမှု လုပ်ဖို့အတွက်တော့ လိုအပ်တဲ့ လေ့လာစရာတွေကို လေ့လာရပါလိမ့်မယ်။
ကျွန်တော်တွေ့ဖူးသမျှ လူအများစုကတော့ ကိုယ်ပိုင်လုပ်ငန်း လုပ်ဖို့ အားသန်ကြပါတယ်။ ကိုယ်ပိုင် အလုပ်လုပ်တာ ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင် စိတ်ပါသလို အခြားသူတွေကိုလည်း အားပေးပါတယ်။ ဒါပေမယ့် လုပ်ငန်း မကျွမ်းကျင်ပဲ ကိုယ်ပိုင် အလုပ်လုပ်ရင်တော့ အလကားပါပဲ။ ကိုယ်ရှာထားတဲ့ ပိုက်ဆံ ရေထဲချလိုက်တာကမှ ပလုံလို့ အသံမြည်ပါလိမ့်မယ်။ အဲဒီလို ဆိုရင်တော့ ပလုံလို့တောင် ကြားလိုက်ရမှာ မဟုတ်ပါဘူး။ လုပ်ငန်း ကျွမ်းကျင်မှု ဆိုတာလည်း နည်းပညာ ကျွမ်းကျင်မှု တစ်ခုတည်း မဟုတ်ပါဘူး။ လူတွေနဲ့ ဆက်ဆံတတ်ဖို့ ၊ ရစရာရှိတဲ့ ပိုက်ဆံကို ရအောင် တောင်းတတ်ဖို့ ၊ လူတွေကို စီမံခန့်ခွဲတတ်ဖို့၊ ငွေရေးကြေးရေးကို နိုင်နိုင်နင်းနင်း ကိုင်တွယ်တတ်ဖို့ ဆိုတဲ့ ပညာတွေ အများကြီး လိုအပ်ပါသေးတယ်။ အဲဒီတော့ ကိုယ်ပိုင် လုပ်ငန်း လုပ်ဖို့ အစီအစဥ် ရှိတယ်ဆိုရင် ကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုတွေကို အများကြီး လုပ်ထားဖို့ လိုအပ်ပါလိမ့်မယ်။
အားလုံးကို ခြုံကြည့်ရင် (ဂွမ်းစောင်က အနွေးဆုံး ဆိုတာမျိုးတော့ မဟုတ်ပါဘူး။ :D) အနာဂတ်အတွက် အချိန်တစ်ခုပေးပြီး ကြိုတင်ပြင်ဆင်မှု လုပ်နေဖို့လိုတယ်လို့ ပြောရပါလိမ့်မယ်။ ဘဝကို ဖြတ်သန်းတဲ့ နေရာမှာ ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင် ဖြတ်သန်းဖို့ အားပေးပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အပျော်မကြူးမိအောင်တော့ ကိုယ့်ဘာသာကိုယ် ထိန်းရပါလိမ့်မယ်။ အားလပ်တဲ့အချိန်တိုင်းကို အပန်းဖြေဖို့ချည်းပဲ တွေးမနေပဲ ကိုယ့်ရဲ့ အရည်အချင်းကို မြှင့်တင်နေဖို့ လိုအပ်ပါလိမ့်မယ်။ ဒီကနေစလို့ နောက်အနှစ်နှစ်ဆယ် ကိုယ့်ရဲ့ မိတ်ဆွေ သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ ပြန်တွေ့တဲ့ အခါမှာ တစ်ချိန်တုန်းက ငါအချိန်ဖြုန်းခဲ့မိလေခြင်းလို့ ကိုယ့်ဘာသာကိုယ် နောင်တ မရမိရင် ပြီးတာပါပဲ။
Posted by ZT at 1:30 AM
ဖတ္ရတာ ဂစ္လ္တီ ျဖစ္လိုက္တာ။
ဒီတိုင္းဆို ဘေလာ့ခ်ည္း ထိုင္ေရးေနတာ ျဖတ္မွပါပဲ။ အားေန အိပ္ေရးဝဖို႔ခ်ည္း မစဉ္းစားဘဲ ဘာသာစကားေလး ဘာေလးလည္း ကၽြမ္းက်င္ေအာင္ လုပ္ဦးမွ။ ပြဲစားအလုပ္လည္း တီးမိေခါက္မိ႐ွိေအာင္ ေလ့လာရမယ္။ service ေပးတဲ့ လုပ္ငန္းေတြ အစားသာဆံုး ေျပာၾကတယ္ မဟုတ္လား။
အသက္ 20 မျပည့္ခင္မွာ အတန္းတူ သူငယ္ခ်င္းက ေျပာဖူးတယ္။ ခုေန ေက်ာင္းတက္ခ်ိန္မွာသာ မသိသာတာ။ အသက္ 30 ေလာက္က်ရင္ လူေတြဟာ တေယာက္နဲ႔ တေယာက္ အေတာ္ကြာသြားေလာက္ၿပီ တဲ့။ အဲဒီတုန္းကတည္းက သူေျပာတာ ဟုတ္သားပဲ လုိ႔ ေတြးမိသား။ ဒါေပမဲ့ အသက္ 30 ဆုိတာ အေဝး......ႀကီးလိုေသးတယ္။ ခုေက်ာင္းေတာင္ မၿပီးေသးဘူး ေအးရာေအးေၾကာင္း ေနလုိက္ဦးမယ္ လို႔ ေတြးခဲ့တယ္။
ေနာင္ အႏွစ္ 20 ဆိုတာ အေဝး......ႀကီးလိုေသးတယ္။
ဒီတရက္ ႏွစ္ရက္နဲ႔ေတာ့ ဘာမွ မထူးေတာ့ပါဘူး။ ေပ်ာ္သလို ေနလိုက္ဦးမယ္...
Lamborghiniေတြ မစီးနိုင္ေသးရင္ေတာင္မွ ကိုယ့္ေဆြမ်ိဳးသားခ်င္းေတြ မက်န္းမာရင္၊ ဒါမွမဟုတ္ ၊ နိုင္ငံမွာလိုအပ္လာရင္နိုင္နုိင္နင္းနင္း
လွဳတန္းနိုင္ေအာင္ေလာက္ေတာ့ ပိုက္ဆံရွိသင့္တယ္ ။
ကိုယ့္အတြက္လည္း အုန္းသီးလိုခ်င္အုန္းသီး၊ ထန္းသီးလိုခ်င္ထန္းသီးဝယ္နိုင္ရင္မေကာင္းလား ဟိဟိ။
အင္း... ကိုဇက္တီက အမွန္ေတြခ်ည္းေျပာျပသြားေတာ့ ဘာျပန္ေျပာရမွန္းေတာင္ မသိေအာင္ျဖစ္သြားပါတယ္...
တခါတခါက်ေတာ့ ေလာဘဆိုတာ အကုသိုလ္တမ်ိဳးပဲဆိုၿပီး ေအးေအးေဆးေဆးေနခ်င္စိတ္ရွိေပမယ့္ တခါတခါက်ေတာ့လဲ လိုရာဆႏၵေတြေနာက္ကို အမွီလိုက္ခ်င္ေနျပန္တယ္... လက္ရွိဘဝမွာ ပိုက္ဆံေပါျခင္း မေပါျခင္းကေတာ့ သူတို႕ သူတို႕ေတြရဲ႕ ေရွးေရွးဘဝေတြက ကုသိုလ္ကံအက်ိဳးေပးေတြနဲ႕လဲ သက္ဆိုင္ပါလိမ့္မယ္...
ကိုယ္ကေတာ့ လက္ရွိဘဝမွာ ပိုက္ဆံေၾကာင့္ စိတ္မဆင္းရဘူး သိပ္ၿပီး မက်ပ္တည္းဘူး ၿပီးေတာ့ အသံုးအစြဲကို လိုတာထက္ပိုၿပီး ထိန္းခ်ဳပ္မေနရဘူး ဆိုရင္ ေတာ္ပါၿပီလို႕ ေက်နပ္ေနမိတာပါပဲ...
"ျမန္မာ စာေရးဆရာမ်ားကလည္း ဝတၱုေတြထဲမွာ ပိုက္ဆံမရွိတာ မြဲတာကို ဂုဏ္တစ္ခုလို လုပ္ျပီး ေရးေနျကေတာ့"
So true. It annoyed me when I read or saw in movies.
အင္း... ကိုယ္ပိုင္ လုပ္ငန္း ကိုယ္ပိုင္ လုပ္ငန္း....
ခုထက္ထိလဲ ကိုယ့္ကို ငွားခ်င္တဲ့ အလုပ္ရွင္ ေတြ႕ေသးဘူး ^_^
စာေတြ လာဖတ္တယ္ အားေပးလ်က္။
rich dad ကို သတိရမိပါတယ္
ဒီစာေလးဖတ္ၿပီးေတာ့ ျပန္စဥ္းစားမိပါတယ္၊ ေန႔တုိင္း ေန႔လည္မွာ ဝယ္ဖတ္ေနတဲ့ Newpaper သတင္းစာ ျပား၇၀ ကုိ၊ မဝယ္ဘဲေခၽြတာရင္ ေကာင္းမလားေပါ့၊ ဒါေပမဲ့ မဖတ္လုိက္ရရင္ တစ္ခုခုလုိသလုိနဲ႔ ထမင္းစားခ်ိန္ေလး စိတ္အပန္းေျဖ တာဆုိၿပီး၊ တစ္ခါတစ္ေလ ဘာမွမဟုတ္တဲ့ဟာကုိ ဖတ္ေနဆဲပါပဲ။
က်ေနာ့္ရင္ထဲက ခံစားခ်က္ေတြနဲ႔ ထပ္တူပါပဲ၊ ဖတ္ရတာအားရလွပါတယ္။
ဗျတ်ဝိဗျတ္တ For Dummies
လူပျိုသိုးကြီးများ သိဖို့ကောင်မလေးတို့အကြောင်း (၂)...
ဥုံဖွ စင်ကာပူနဲ့ မရီနာဘေးက အတွေးများ